Ubufakazi obushaqisayo "ngoshise" iphalamende. - Ilanga News
Home Izindaba Ubufakazi obushaqisayo “ngoshise” iphalamende.
Ubufakazi obushaqisayo “ngoshise” iphalamende.
UVEZE obekungalindelekile ngesikhathi kulalelwe isicelo sakhe sebheyili eNkantolo yesiFunda eCape Town, ngoMgqibelo, uMnu Zandile Christmas Mafe (osesithombeni) osolwa ngokushisa iPhalamende eCape Town ngokusombuluka kuka Masingana (January). Uveze ukuthi wayengumngani kaMnu Eugene TerreBlanche, owayengumholi wenhlangano yamaBhunu, i-Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), owabulawa ngo-2010. Lokhu ukuveze ngesikhathi ebuzwa ngumshushisi, u-Adv Mervyn Menigo, ukuthi ngaphandle kwaseMahikeng lapho engowakhona eNorth West, wake waya yini eVentersdorp.
Uphendule wathi: “Zindawo zami iVentersdorp lezi zikababa u-Eugen TerreBlanche laphaya kulawa mapulazi,” kusho uMnu Mafe. Utshele inkantolo ukuthi abanini bamapulazi bakuleya ndawo ngabangani bakhe. Uphinde wabuzwa nangoMnu Janusz Walus owabulala uMnu Chris Hani, owayengunobhala weSACP. Uvele waphendula ngokuthi ubhalile encwadini thizeni ukuthi ucele ukuba uWalus akhululwe ejele ngomhla ka-11 kuNhlolanja (February) ngoba useqede iminyaka ewu-27 esetilongweni. “Ngicela akhululwe ngalolu suku okwakhululwa ngalo uMnu Mandela (Nelson),” esho. Uthe uhulumeni kumele unike umndeni kaWalus u-R100 000 ngenyanga, ngoba usehlale ejele iminyaka elingana neyahlalwa
Uphinde wathi futhi kumele umcimbi waminyaka yonke lapho umengameli wezwe esuke ethula khona inkulumo yesizwe, obizwa ngeState of the Nation Address (SONA), ungabikhona nonyaka. U-Adv Menigo umbuze ngezigaba ezithile zezitatimende ezifungelwe (affidavits), okuhlanganisa esakhe uMnu Mafe nesomphenyi wecala, uColonel Christiaan Theron, uthi kukhona yini afisa ukukuphawula ngazo. Akathandanga ukuphawula ngokuningi abebuzwa ngakho okukulezi zitatimende ngoba ethi akafuni ukungena engqikithini yecala elisazoqulwa enkantolo enkulu. UMnu Mafe uqinisekise phambi kwemantshi, uNkz Michelle Adams, ukuthi unayo indawo yokuhlala, waze waveza nokuthi inesiqandisi (fridge) neDSTV, okuwukuthi akayena umuntu ongundingasithebeni.
UNkz Adams uveze ukuthi ngokusho kukaCol Theron ongumphenyi wecala uMnu Mafe wazisholo ngokwakhe ngesikhathiemphonsa imibuzo emuva kokubanjwa kwakhe, ukuthi nguyena oshise iPhalamende nakulokho uMnu Mafe uthe akanakuphendula. Kuvela ukuthi ngesikhathi amaphoyisa emphonsa imibuzo, wawatshela izizathu ezintathu ezamenza walishisa iPhalamende. Wathi: Ufuna uMengameli Cyril Ramaphosa asule ngokushesha esikhundleni; * Ufuna kukhululwe uMnu Janusz Walus ngoba akambulalanga uMnu Hani kodwa nguMnu Ramaphosa owambulala; * Ufuna bonke abantu abangasebenzi baholelwe isibonelelo sika-R1 500. U-Adv Menigo, uveze ukuthi uMnu Mafe waqhubeka watshela uColonel Theron ukuthi washisa iPhalamende ukuze ingabi khona iSONA kulo nyaka, owayichaza ngokuthi yi State of the Nonsense Address.
Kuvela nokuthi elinye iphoyisa lakhombisa uMnu Mafe isithombemnyakazo (video) yePhalamende lisha, wazishaya isifuba wathi uzizwa ethokozile. Wathi “yebo lowo nguChristmas (elinye igama lakhe). Kuvele nokuthi watshela amaphoyisa ukuthi wathenga uphethiloli ka-R10 egalaji eliseBellville (okubikwa ukuthi walikhomba emaphoyiseni), wawufaka esipakupakwini seCoke okuyiwona okusolwa ukuthi wawusebenzisa ukushisa iPhalamende. Okunye okuvelile wukuthi uMnu Mafe wamkhombisa uColonel Theron lapho agqekeza wangena khona ePhalamende. Okwakushiwo nguMnu Mafe ngesikhathi ehlambuluka emaphoyiseni, kuthiwa kuqoshiwe kwisithombemnyakazo.
Ngokwesitatimende kuvela nokuthi uMnu Mafe wakhononda ngokungabi nakudla nezinye izinsiza, wathi bekufanele ashise iPhalamende ngoba kalibasizi ngalutho abantu baseNingizimu Afrika. U-Adv. Menigo uveze nokuthi kunobufakazi bezithombe ezinomuntu ogqoke izimpahla ezifananse nezazigqokwe nguMnu Mafe ngesikhathi ebanjwa ngamaphoyisa, engaphakathi ePhalamende, eshisa. Imantshi isigodlile isinqumo ngalesi sicelo sebheyili. Kulindeleke ukuba sikhishwe ngoLwesihlanu.
Previous articleUmbango womzila ukhiphe izidumbu
Next articleIndlobane kowesifazane oshelwe yizingane (4) zafa ‘eyophuza’